Muhaajir loo haysto weerar mindi - BBC News Somali
Muhaajir loo haysto weerar mindi
Ninka aadka loogu haysto inuu ka dambeeyay dilka labo ruux oo ka dhacay dukaanka Ikea ee Sweden ayaa deg deg loo masaafurinayaa, isagoo saacado ka hor weerarka mindida inta uusan dhicin ka qeybgalay kulan la xiriira magangalyadiisa, sida ay saraakiishu sheegeen.
Ninkan 35 jirka ah oo u dhashay Eritrea ayaa lagu qabtay goobta falku ka dhacay, isagoo dhawacyo mindi ay ka muuqdaan.
Hooyo iyo wiilkeeda ayaa weerarkaas ku dhintay oo ka dhacay isniintii magaalada Vasteras. Nin labaad ayaa loo xiray falkaasi.
Arbacadii ayuu war uu soo saaray xafiiska xeer ilaaliyaha ku sheegay in baarayaasha ay weli hayaan 23 jir ay isku xarun magangalyo joogeen ninka dhaawacmay. Wuxuuna beeniyay inuu weerarka ku lug lahaa.
Booliska oo sheegay inaysan cadeyn sababta weerarka ayaa sidoo kale aaminsan inaysan keenin siyaasad.
Saraakiisha socdaalka ayaa sheegay in 35 jirka uu kala kulmay subaxdii isniinta qorshooyin la xiriira in Italy loo masaafuriyo, kaddib markii codsigiisa deganaasho la diiday bishii hore.
Wargeyska Aftonbladet oo ka soo baxa Sweden ayaa soo wariyay in kaamerada CCTV-ga laga arkay ninkan laga shakiyay oo qaadanaya labo mindi, ka hor inta aan la weerarin haweeneyda 55 jirka aheyd iyo wiilkeeda oo 27 jir ahaa. Weerarka ayaa istaagay markii ninkan loo haysto inuu wax dilay uu iska dhaawacay caloosha.
Dukaanka magaalada Vasteras ayaa 115km galbeedka kaga beegan magaalada caasimadda ee Stackholm.